Global Voices teny Malagasy » Myanmar ny andron’ny 26 septambra · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 28 Septambra 2007 9:01 GMT 1	 · Mpanoratra Preetam Rai Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Lahatsoratra Malaza, Iray volana, Lahatsoratra voalohany!, Lahatsoratra roa, Telo volana, Lahatsoratra dimy, Enimbolana, Lahatsoratra folo, Herintaona, Roa taona, Lahatsoratra dimy amby roapolo, Lahatsoratra dimampolo, Dimy taona, Lahatsoratra dimy amby fitopolo, Lahatsoratra zato, Folo taona, Lahatsoratra roanjato, Lahatsoratra telonjato, Lahatsoratra efajato, Myanmar (Birmania), Ady & Fifandirana, Fanoherana
Namoaka sarimihetsika roa ilay mpampiasa YouTube dennisbier09  ary nanoratra :
Awzar Thi kosa nanangona ny sarim-pihetsiketsehana nalefan’ny mpibilaogy Birmana tao amin’ny vohikala Saffron Revolution  [en] (Revolisiona jaky)
Mieritreritra ireo namany any Birmania  ny mpibilaogy Thailandey Bangkok Dazed [en]
Naharay mailaka roa avy tamin’ny namako any Rangoon aho androany tolakandro. Nanoratra ny iray tamin’ireo fa « mihenjana tena mihenjana ny raharaha. Mikatona manomboka rahampitso ny sekoly ianaranay. Tsy fantatro intsony izay hitranga. »Nanoratra ihany koa ny Birmana iray : « Manomboka mifandona ny ao an-tanàna ao androany. Tahaka ny ho ratsy ny fandehan’ny raharaha. Mbola hanoratra ihany aho. Tsy fantatro intsony aloha hoe haharitra hafiriana aho no mbola afaka hivoivoy aterineto…mety hotpahiny manko io izao. »Tsy nitsahatra ny nivoivoy aho tao ho ao hanaraka ny toe-draharaha. Tahaka ny efa manankery ankehitriny ny tsy fahazoana mivoaka amin’ny alina ao Rangoon sy Mandalay. Mandritra izany fotoana izany kosa dia miangavy an’i Malaisia sy ny Fikambanan’ny firenena ao Azia Atsimo-Atsinanana (ASEAN) ny politisiana Lim Ki Sian [en] handray an-tanana ny raharaha  hialana amin’ny ra mandriaka ao Myanmar.
Efa nampitandrina an’i Inda sy Shina, mpifanolotra sisintany no manohana ny fitondrana jado-miaramila ao Myanmar ihany koa ranamana io tamin’ny sorany teo aloha :
Nizara ny fahitany ny toe-draharaha ao Myanmar  ny mpibilaogy teratany Yangon Thu [en]. Manaika ny mpamakiny izy mba hanao fanangon-tsonia mangataka :
Esoesoin’i  Bangok Dazed [En] ny fanapaha-kevitry ny filoha Amerikana George Bush milaza ny hanasazy an’i Myanmar :
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2007/09/28/36/
 ireo namany any Birmania: http://weblogs.thingsasian.com/tablogs/page/dgilliland?entry=b_tense_situation_b
 handray an-tanana ny raharaha: http://blog.limkitsiang.com/2007/09/26/saffron-revolution-in-burma-malaysia-and-asean-must-do-more-to-avoid-bloodbath/
 sorany teo aloha: http://blog.limkitsiang.com/2007/09/25/asean-govts-must-warn-myanmar-military-another-bloodbath-ala-1988-completely-unacceptable/
 toe-draharaha ao Myanmar: http://www.moeyyo.com/MM/archives/000997.html